Kulamo Madaxweyne Gaas uga Bilowday Magaalada Gaalkacyo – Radio Daljir
Seteembar 15, 2015 4:59 b 0
Talaado, September 15, 2015 (Daljir) — Madaxwynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib safar qaatay muddo 4maalmood ah oo uu kujoogey Magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubba-land.
Madaxweynaha iyo weftiga uu hoggaamiyey ayaa garoonka diyaaradaha ee Cabdulaahi Yuusuf Airport ee magaalada Gaalkacyo waxaa kusoo dhoweeyey Guddoomiyha Baarlamaanka Puntland Mudane Siciid Xassan Shire, Xubno ka kala socdey Golayaasha dawladda, Saraakiil ciidan iyo dadweyne kale oo aad u fara badan.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta uga warbixiyey safarkiisa oo kusaabsanaa kaqaybgalka caleemo saarka Madaxweynaha Jubba-land kadib shir jaraa’id oo uu ku qabtay hoyga uu ka deganyahay magaalada Gaalkacyo.
Waxaana uu sheegay Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Safarkiisu inuu ahaa oo keliya kaqaygalka Caleemo saarka Madaxweynaha Dawlad goboleedka Jubba-land arrintaasina ay guul ugu soo dhammaatay, wuxuu kaloo sheegay madaxweyne Gaas inuu salaantii uu shacabka Puntland kaqaaday uu ka gaarsiiyey Madaxweynaha Jubba-Land iyo Shacabkiisaba sidookalen uu mid taa lamid ah kawada Reer Jubba-land Madax iyo shacabba.
Madaxweyne Gaas waxaa maanta u kulamo la qaatay qaar kamid ah golayaasha dowladda ee ku sugan amgaalada Gaalkacyo,
Dhagayso: B.Saakay iyo Dunida Iyo Daljir Kooshin 15 -Sep 2-15 Maxamed Cabdullaahi Cali (Kooshin) Radio Daljir Garowe